विचार – Page2– Karnalitimes
संभवतः प्रदेश स्तरमा मिडियाको विकासको लागि सबैभन्दा पहिले नीतिगत व्यवस्था गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रको बृहत्तर विकासको लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, व्यक्ति केन्द्रित भएर स्थापनाको प्रयास हुँदा दुई वर्षसम्म पनि प्रतिष्ठान स्थापना हुन सकेको छैन । स्थापना किन हुन सकेन त ? केही कारण यस्त
अरबपति मालिक, सडकछाप पत्रकार
भानुभक्त आचार्य कोभिड १९ को बहाना गरेर मिडिया मालिकहरुले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई जागिरबाट हटाइरहेका छन् । अहिले बेरोजगार पत्रकारको जुलुस, धर्ना र सकड गतिविधि भइरहेको छ । ‘थोरै कोरोना, धेरै बहाना’, ‘सम्पादकको मुटु छ मर्म छैन’, ‘सञ्चार गृहले कमाएको अर्बौ मुनाफा खोई?’ ‘मालिक मोज र तडकभडकमा, पत्रकार भोकभोकै सडकमा’ जस्ता नाराहरु घन्किएका छन् । सरकार आफ्नै राजनीतिक किचलोमा फँसेको, कोरोनाले गर्दा
अमानवीय घटनामा राजनीति हावी हुने डर पैदा गरेको त्यो यात्रा
सुर्खेत । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको महामारी कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र जोखिम नियन्त्रणका लागि सिंगो देश नै लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरु, शैक्षिक क्षेत्रलगायतमा संलग्न अधिकांश मानिसको दैनिकी ठप्प भएपनि मेरो भने निरन्तर चलिरहेको छ । मेरो जस्तै पेशा भएका मानिसको दैनिकी बन्द गर्न ‘कोरोना महामारी’ले सक्दैन, न त अन्य कुनै विपद्ले । झन् सक्रीय हुनुपर्छ । बन्दाबन्दीका
सम्पादकीय टिप्पणी : विवादको भूमरीमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
देश कोरोना संक्रमणको चपेटामा छ । यसले पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशलाई पनि निकै च्यापिसकेको छ । यस्तो बेला प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भने एकपछि अर्को गर्दै विवादको भूमरीमा फसिरहेको छ । यो राम्रो पक्ष होइन । ‘मकै–काण्ड’ मा निकालेको प्रेस विज्ञप्ति होस् वा नगर विकास समितिको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानको पार्क बनाउन दिइएको प्रकरण होस् । अझ भनौं, जन नमुना माविको
संकटको बेला निजी क्षेत्रलाई जोगाउनु राज्यको दायित्व
पदमबहादुर शाही अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाण्यि महासंघ अहिले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । उद्योगधन्दा, व्यापार ब्यबसाय ठप्प छन् । निजी क्षेत्र निराश अवस्थामा छ । तैपनि आशाको पर्खाइमा रहेको छ । यो होटेल चल्ने मुख्य सिजन हो । अब गइसक्यो । सरकारले राजस्व र कर तिर्ने केही समय थप गरे पनि तर अर्थतन्त्र बन्द हुँदा समस्या चर्को छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छ
‘चौकुने’ कृषि विकासका योजना
गोरख बहादुर शाही वाास्तवमा सारतः मानव जातिको जीवन प्रत्यक्ष वा पोरोक्ष रुपमा सम्पुर्ण तवरले कृषि उपजमा नै टिकेको छ । कर्म जेसुकै गरेपनी, धर्म जे कै मानेपनी,जन्म जहाँसुकै भएपनी अन्ततः जिवित जन्तुका लागि खानु र बाच्नु नै हो ।जुन कुराको परिपुर्ती कृषि प्रणालीले मात्र पूरा गर्न सक्छ । खानको लागि बाँच्ने भन्दा पनि बाँच्नको लागि खानै पर्छ । बाँच्नको लागि खानुपर्ने अपरिहार्यताका कारण खाने कुराको
लकडाउन : बालबच्चासँग सम्बन्ध कसिलो पार्ने र सुधारको जग हाल्ने उत्तम अवसर
कौशीला चन्द यो लकडाउन, अर्थात घरभित्रै बस्ने समय हो । कोरोनासँगको लडाइँ जित्नका लागि हामी सबै आ–आफ्नो घरभित्र बसिरहेका छौं । बस्नु पनि पर्छ । यस्तो बेला लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै रचनात्मक कुरामा आफ्नो समय लगानी गर्नुपर्छ । निश्चय नै, लकडाउनले हामी सबैको दैनिकी प्रभावित भएको छ । आवतजावतमा कठिनाइ भएको छ भने ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेलाई साँझ बिहानो चुल्हो बाल्न हम्मे भएको छ । यद्यपि,
दिपेन सुवेदी हाल विश्व कोरोना (कोभिड—१९) संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । यो हरेक दृष्टिकोणले निकै जोखिम तथा चुनौतिपुर्ण अवस्था हो । यो समस्या हाम्रो साझा चुनौतीको विषयका रुपमा रहेको छ । त्यसैले यस अवस्थामा सही सूचना आम नागरिकका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सूचना लोकतन्त्रको प्राण हो । विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा सूचनाको महत्व लोकतन्त्रमा निर्वाचनको जत्तिकै हुन्छ । सहि सूचना पाउने हकला
‘मैंले राहत दिएको होइन सहयोग गरेको हो’ अध्यक्ष विष्ट
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउनको समयलाई थप्दै गइरहेको छ । लकडाउन हुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरिक, बाढीपिडित र सुकुम्बासीहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । उनीहरुलाई साँझ बिहानको छाक टार्नसमेत मुस्किल भइरहेको छ । यस्तो बेला उनीहरुलाई सहयोगीहरुको खाँचो छ । कोरोना संक्रमणका कारण अहिले मानिसहरु घर बाहिर आउँदैनन् । यस्तोमा
प्रचारवादी राहात वितरण कति न्यायोचित ?
प्रेम बहादुर दर्जी जति भन्दा र सुन्दा सजिलो जस्तो लाग्ने सामाजिक कार्य गर्न त्यतिनै अप्ठारो छ । यो समाज संग, समाजको दैनिकी संग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको बिषय हो र यो बिषय त्यतिकै भेग पनि छ । आज संसारका जे जति समाज परिवर्तित देखिन्छन ती परिवर्तन हुनुको पछाडी सामाजिक कार्यकर्ताको पनि ठुलो भुमिका रहेको छ । आज भोलि सामाजिक अभियान्ताका बाटै आफ्नो सेवाग्राहीको सामाजिक हैसियतमा खलल पुग्ने गरी सामाजि